Atụmatụ SEO iji gbanwee azụmahịa gị ka ọ bụrụ otu n'ime azụmahịa E | ECommerce ozi ọma
Mgbe anyị na-ekwu maka SEO, anyị na-ezo aka na omume niile ahụ anyị mere ka nke anyị weebụsaịtị nwere nleta ndị ọzọ. Atụmatụ ndị a yiri nke ahụ, mana ha dịgasị iche dabere na ebumnuche weebụsaịtị anyị. A blog ebe ị na-ere ọdịnaya abụghị otu, na a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmahịa E-azụmahịa, yabụ na ọ dị mkpa ka ị mata omume ị ga-eme tinye SEO na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmaahịa e-commerce. Ọ bụrụ na ikpe gị bụ nhọrọ ikpeazụ, isiokwu a masịrị gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ ahịa, ihe ọ sọrọ ya mee, ọ ga-adaba adaba na ị ga-amalite iche maka uru dị n'ịbanye n'ahịa kọmputa. Ọ bụchaghị banyere dochie gị niile ahịa azum na e-azụmahịa, ma banyere tinye usoro ndị ahụ nyere gị ohere itinye uru asọmpi na azụmaahịa gịyanakwa uzo ohuru esi enweta ego. Usoro ohuru a di iche na ahia ahia, na Anyị na-amakarị ha dị ka SEO (Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta) ma ọ bụ, sụgharịa ya na Spanish, njikarịcha Nchọgharị.
Ma ibido abụghị ọrụ dị nfe, ma ya fọdụ na anyị pere mpe ma ọ bụ na anyị amachaghị nke ọma usoro e-commerce ugbu a. Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na itinye usoro SEO maka azụmaahịa gị n'ịntanetị ga-ewetara gị nnukwu uru, Ma ị maghị ebe ị ga-ebido, obi adịla gị mma, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị n’ụwa niile na-ata ụdị ihe ahụ. Luckily, ebe i nwere ike ịhụ a obere ntuziaka na-amalite a ọhụrụ oru ngo na-eto eto na azụmahịa gị na-enweghị na-adaghị mgbalị. Anyị na-ejikọ ndụmọdụ na ntuziaka nke ndị ọkachamara kachasị mma n'okwu a, ka ị wee nwee ike ịchọta ụzọ kachasị dị mfe ma dị irè iji nweta ya.
1 Kedu otu m ga-esi malite itinye SEO n'ọrụ m?
2 Usoro 1: Nyocha SEO n'ime
2.1 Enwere m ọrụ niile dị mkpa na nke dị mma nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị chọrọ?
2.2 Kedu ka ndị ahịa m si ahụ m n'ịntanetị?
2.3 Gịnị bụ isiokwu na otu esi etinye ha?
2.4 Kedu otu mfe na ngwa ngwa ka ndị ahịa m si achọta m?
3 Strategy 2: Ntughari ohuru nke weebụsaịtị gi
4 Usoro ndị ọzọ na-aga n'ihu na SEO
5 Uru nke gụnyere SEO atụmatụ na azụmaahịa gị
Kedu otu m ga-esi malite itinye SEO n'ọrụ m?
SEO na-ezo aka na omume niile anyị na-eme iji hụ na ndị ahịa anyị nwere ike nwere ike ịchọta ụlọ ahịa anyị n'ụzọ dị mfe site na engines ọchụchọ dị ka Google ma ọ bụ Bing. N'ụzọ dị otú a, ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwe ike ịnweta weebụsaịtị anyị ma nwee ike ịzụta ihe dị mfe na ngwa ngwa, na-enweghị mkpa ka ị tinye nnukwu ego na mgbasa ozi.
Nke a bụ atụmatụ abụọ ị nwere ike ịgbaso iji melite SEO na webụsaịtị gị nke emebere maka ire ahịa n'ịntanetị ma ọ bụ ecommerce.
Usoro 1: Nyocha SEO n'ime
Mara ebe ịchọrọ ịga ị ga-ebu ụzọ mara ebe ị nọ. Jụọ onwe gị akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ gị nke ị nwere ike imeziwanye ka ọ bụrụ ndị ahịa-enyi na enyi. Mee onwe gị nyocha SEO n'ime onwe gị, nke ị nwere ike ijide n'aka na ihe SEO anyị na-akọwa n'okpuru dị n'usoro
Enwere m ọrụ niile dị mkpa na nke dị mma nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị chọrọ?
Anyị na-ekwukarị banyere ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ akwụ ụgwọ na usoro nchekwa SSL. Google na-ebute ibe ndị ahụ ụzọ nke na-enye ndị ahịa ya sistemụ nchekwa niile dị mkpa iji zụta ihe ịga nke ọma n'ịntanetị. N'otu ụzọ ahụ, bandwidth gị na nbudata nbudata gị ga-anakwere, ma ka mma ha, nke ka elu ị ga-apụta na nsonaazụ. Ọ dị mkpa na ị nwere akụkụ ndị a ka ibe gị wee pụta mgbe niile na nsonaazụ mbụ
Kedu ka ndị ahịa m si ahụ m n'ịntanetị?
Lelee ebe ọtụtụ ndị ọbịa gị si. Ha nwere ike ịbụ site na njikọta na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ site na ịpị na injin ọchụchọ. Ọbụna na-ede URL gị ozugbo. Ebumnuche nke SEO dị mma bụ na ọtụtụ ndị ahịa na-abịa site na injin ọchụchọ. Nke a bụ otu esi arụ ọrụ, na enweghị ịkwụ ụgwọ maka ụdị mgbasa ozi ọ bụla, ndị ahịa nwere mmasị na ngwaahịa gị ga-achọta gị ngwa ngwa.
Gịnị bụ isiokwu na otu esi etinye ha?
Keywords bụ ndị gị ahịa ga pịnye ke search engines na-enwe olile anya ịchọta ụlọ ahịa na-enye ngwaahịa na ọrụ ha na-achọ. Ihe dị mkpa bụ iji tinye ha n’uche. Egbula imeghachi okwu a ma ọ bụ okwu ahụ nke ukwuu, ebe Google nwere ike iwere gị dị ka ibe SPAM. Ihe dị na ya bụ ịgụnye ha n'ụzọ kachasị dị n'okike, na-eme ka ahịrịokwu jikọta ma doo anya. Nwekwara ike ịgụnye mkpụrụokwu dị n'ime onyonyo gị ma ọ bụ faịlụ multimedia ndị ọzọ, naanị ị ga-amụta ịmụta metadata nke ibe gị.
Kedu otu mfe na ngwa ngwa ka ndị ahịa m si achọta m?
Ihe mbụ bụ imeghe njin ọchụchọ ị họọrọ ma chọọ isiokwu ndị jikọtara na ibe gị. Ọ na-atụ aro ka ị na-agụnye ọnọdụ, iyo nyo na ndị nọ n'ógbè gị. Ga-ahụ otu oge ị na-arịgo ebe na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na ị gaghị eche ka ị gosipụta ihe ị ga-eme n'abali, mana ị ga-eji nwayọ nwayọ.
Gwa onye ị tụkwasịrị obi ka ọ gbalịa - chọta peeji gị site na nyocha ọchụchọ, nke mere na emesia ọ kọọrọ gị ahụmahụ ya. Nke a na-enyere aka ịhụ ihe n'ụzọ ziri ezi, na-achọta isi ihe maka mmelite. I nwekwara ike ịrịọ ya ka ọ gaa ozugbo na ibe gị wee kpughee menu na ngalaba niile. O nwere ike iju gị anya ịhụ njikọ ndị gbajiri agbaji ma ọ bụ menu ndị anaghị arụ ọrụ, nke ị na-ahụghị.
Strategy 2: Ntughari ohuru nke weebụsaịtị gi
Etu ị si kpebie ịnata ịkwụ ụgwọ dị ezigbo mkpa. Anyị na-akwado ka ị nyochaa ụzọ dị iche iche ị ga-esi na-enweta ịkwụ ụgwọ na ntanetị yana uru na ọghọm ha. Ke ofụri ofụri, ndị na-enye ndị kasị nche n'ihi na gị na ahịa bụ ndị kasị oké ọnụ, ma ha bụ ndị kwesịrị ya ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịnọgide na-ere online, na ha ga-enye gị a bukwanu mpi uru.
Uche nke weebụsaịtị gị dị oke mkpa. Ọ bụghị na o mebiri oke, n'ụzọ megidere. Maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ndị enyi na ndị dị mfe iji, ọkwa ka mma ha ga-abụ site na injin ọchụchọ. Jiri menu na-adaba na agba enyi, lelee na njikọ gị na-arụ ọrụ ma chọpụta na enwere nguzozi ziri ezi n'etiti ogo na ịdị arọ nke ihe oyiyi ị na-eji.
Jiri ngwa ndị ị ga-akpokwuru ndị mmadụ na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị nwere nchekwa data nke ndị ahịa gị, egbula oge izipu mgbasa ozi oge ụfọdụ, ma gwa ha gbasara ụlọ ahịa ịntanetị ọhụrụ gị nye ndị ahịa bịara ụlọ ọrụ gị. Maka ya ka ọ rụọ ọrụ dị ka atụmatụ SEO, ị ga-etinye njikọ na weebụsaịtị gị, ma ọ bụ na isi ma ọ bụ na ngalaba nke nkwalite pụrụ iche.
Jikwa ụdị netwọkụ mmekọrịta ọ bụla ma jikọta ha na weebụsaịtị gịWayzọ a ị ga - erute ọtụtụ mmadụ ma ụlọ ahịa ịntanetị gị ga - enwe ọnụnọ sara mbara karịa na ahịa ịntanetị.
Usoro ndị ọzọ na-aga n'ihu na SEO
Ọ bụrụ na ị tụlee na oge erubeghị igosipụta onwe gị dị ka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, a ka nwere ụzọ ndị ọzọ iji nọrọ na igwe ojii jiri SEO ngwaọrụ. Can nwere ike ịmalite site na ijikwa akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta maka ụlọ ahịa gị, dị ka Facebook, Twitter na Instagram ma jikọta ha na ebe nrụọrụ weebụ nke gị nke gụnyere ozi bụ isi banyere ụlọ ọrụ ahụ, dịka ọnọdụ, oge, na ọbụna obere katalọgụ. Ọ gaghị abụ naanị ụzọ nkwukọrịta ka gị na ndị ahịa gị ga - esi kwue ọkwa, nkwalite, onyinye ma ọ bụ ngwaahịa ọhụụ.
Ọzọkwa You nwere ike iji ha dịka ngwa mgbasa ozi iji rute ọtụtụ ndị ahịa nwere ike. Na mgbakwunye, ọ ga-ewetara gị ọtụtụ elele ma ọ bụrụ na ị mee ka ndị ahịa gị pịa njikọ gị na netwọkụ mmekọrịta gị. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ezigbo ụzọ ị ga - eme, ị ga - ahụ na obere obere na karịa ị ga - enwe mmetụta nke ọma gburugburu ebe ị na - ere ahịa n'ịntanetị, ị ga - enwe ike ikpebi ma ị bido inwe ngwaahịa dị maka ijikwa ahịa dị n'ịntanetị .
Uru nke gụnyere SEO atụmatụ na azụmaahịa gị
Ọ bụ eziokwu na ọ chọrọ ọrụ ole na ole iji tinye usoro SEO na azụmaahịa gị n'ịntanetị., ma uru ndị na-abịa na nke a bụ nnukwu ego na uru dị ukwuu, ụfọdụ n'ime ha bara.
Site na igosi na nsonaazụ ọchụchọ, ị ga-enwe ike iru ahịa sara mbara karị, ebe ọ bụ na ị ga-aga site na ikpuchi onyinye ahụ naanị n'ime ahịa mpaghara, kwupụta nke mba ma ọ bụ nke mba. Cheta na ị nọ n'ịntanetị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ n'ụwa nwere ike ịnweta ịntanetị nwere ike ịma ngwaahịa gị, yabụ mkpuchi gị nwere ike ịgbasa ebe ịchọrọ.
E nwere ọtụtụ akụkụ nke ijikwa atụmatụ SEO nwere ike ịchekwa gị ego. N'otu aka, ọ ka ukwuu itinye ego na ọkachamara SEO ọkachamara na-enye ibe gị ihe niile ọ chọrọ ka Google ma ọ bụ Bing were ya otu n'ime nhọrọ kachasị mma, karịa ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa maka mgbasa ozi.
Oge ị na-etinye na atụmatụ SEO ga-akwụ ụgwọ n'oge dị mkpirikpi na ogologo oge.Ọ bụrụhaala na ị na-ezute ụkpụrụ ogo Google, ibe gị ga-apụta na nsonaazụ mbụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » SEO » Atụmatụ SEO iji gbanwee azụmahịa gị ka ọ bụrụ otu n'ime azụmahịa E-commerce